အခုကျနော်တို့ကိုင်ဆောင်နေတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း တနေ့တခြားမြင့်တက်လာပြီး၊ တစ်ချို့ကွန်ပြူတာအဟောင်းတွေနီးပါး စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ကွန်ပြူတာတစ်လုံးလို ဘယ်တော့မှမသုံးနိုင်မယ့်တစ်ချက်က စခရင်အရွယ်အစားလို့ပြောရမှာပါ။ မိုဘိုင်းပရိုဆက်ဆာတွေဟာ ကွန်ပြူတာပရိုဆက်ဆာနီးပါး စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းချင်ကောင်းလာနိုင်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ကွန်ပြူတာတစ်လုံးလို Multitasking သုံးဖို့အတွက်က စခရင်ကိုယ်တိုင်က အလွန်ဆုံးခြောက်လက်မလောက်ပဲရှိတာကြောင့် အဆင်ပြေဖို့ မလွယ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါဆို စမတ်ဖုန်းကို မော်နီတာနဲ့ ချိတ်ပြီးသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကော? "Remix OS for Mobile" နဲ့ ဆိုရင်တော့ ဒါကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
Microsoft Surface ပုံစံ Ultra တက်ဘလက်တွေထုတ်ထားတဲ့ Jide Technology ကုမ္ပဏီဟာ အခုဆိုရင် Remix OS အသစ် Remix OS for Mobile ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ Remix OS ဟာ Android စနစ်အခြေခံ OS တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အရင်က Tablet အရွယ် Display တွေအတွက် ဦးတည်ရေးဆွဲခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Desktop OS အဖြစ်ပါ ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Remix OS for Mobile မှာ “Remix Singularity” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ feature တစ်ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး၊ Android ဖုန်းကို မော်နီတာနဲ့ချိတ်ကာ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးအသွင်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မော်နီတာမှာပေါ်တဲ့ interface ကတော့ Windows 10 နဲ့ တော်တော်လေးဆင်တူတာ တွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ဒါဟာ အိုင်ဒီယာအသစ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါ။ Microsoft ကိုယ်တိုင်က ဒီလိုပုံစံအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် Windows 10 Mobile feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Continuum ကို မိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Remix OS for Mobile ရဲ့ “Remix Singularity” က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မှာလဲ?
သိပ်မခက်ခဲပါဘူး။ Remix OS ကို စမတ်ဖုန်းမှာသုံးမယ်ဆိုရင် ဖုန်းအတွက်သီးသန့်လုပ်ပေးထားတဲ့ UI ကို မြင်တွေ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ဖုန်းကို မော်နီတာ ဒါမှမဟုတ် TV နဲ့ Dock တစ်ခုကနေ ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ Windows ကွန်ပြူတာတစ်လုံးအသွင် အလိုလိုပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ ကီးဘုတ်နဲ့ မောက်စ်တွေ ချိတ်ဆက်သုံးဖို့အတွက်လည်း OS ကို Optimize လုပ်ပေးထားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ( ဖုန်းနဲ့ မော်နီတာကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် Dock ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ အခုထိမသိရသေးပါဘူး။)
Jide ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ David Ko ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ Remix OS ရဲ့ UI ကို stock Android ( မူလ Android ) ပုံစံအတိုင်း အနီးစပ်ဆုံးထားပေးထားမှာဖြစ်ပြီး၊ Google Play လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Remix OS for Mobile ကို တခြား Remix OS ဗားရှင်းတွေအတိုင်း အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ဘယ်လိုဟာ့ဒ်ဝဲမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ကြော်ငြာဗီဒီယိုမှာသုံးသွားတဲ့ဖုန်းကတော့ Nexus 5X ဒါမှမဟုတ် 6P ဖြစ်တာကြောင့် Nexus ဖုန်းတွေမှာ အရင်သုံးနိုင်မယ့်ပုံပေါ်ပါတယ်။
Remix OS for Mobile ကို စိတ်ဝင်စားလို့ စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ချင်ရင် ယခုနှစ်သြဂတ်စ်လလောက်အထိပဲ စောင့်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ Jide website မှာ သတင်းအသစ်တွေရယူဖို့ Sign Up လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Android Remix OS Remix Singularity Jide Smartphones Operating System Computer